Ahoana ny vehivavy ho More amin'ny Ebay? Mody ho Man - News Fitsipika
Ahoana ny vehivavy ho More amin'ny Ebay? Mody ho Man
Men mahazo vola 20% bebe kokoa amin'ny eo ho eo noho ny vehivavy mitovy mivarotra entana vaovao ao amin'ny eBay, mandatsa fahazavana amin'ny mahatsiaro tena mifanavakavaka izay vokany eo mividy fitondran-tena
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ahoana no ahafahan'ny vehivavy manao bebe kokoa amin'ny Ebay? Mody mba ho olona” nosoratan'i Iana Sample Science mpamoaka lahatsoratra, ho an'ny The Guardian ny Zoma 19 Febroary 2016 19.04 UTC
Vehivavy mpivarotra entana an-tserasera toa afaka haka ambony vidin raha vonona ny hanao tsotra iray tweak ny dity: mody izy ireo ny olona.
Ny fitadiavana mivoaka avy amin'ny fanadihadiana izay hita fa eo ho eo ny olona nahazo 20% mihoatra noho ny vehivavy rehefa nivarotra mitovy vokatra vaovao ao amin'ny eBay.
Ny tsy fitoviana Toa avy amin'ny fironana rehetra mpividy – na lahy na vavy – mba hanolotra tsy ny zavatra nataony ho lavanty amin'ny aterineto tsena, raha ny mpivarotra no vehivavy.
"Tsy tokony hitady ny elanelana, fa izahay gaga ny halehiben'ny, indrindra fa ny lehibe indrindra dia ny vokatry ny vokatra vaovao izay ny vehivavy sy ny lehilahy fa nivarotra mihitsy ny toy izany,"Hoy Tamar Kricheli-Katz, ny mpahay fiarahamonina ao amin'ny Tel Aviv University.
Related: Ahoana no ahafahantsika mampifantoka tsy nahatsiaro tena fanavakavahana? | Nathalia Gjersoe
Ny vokatra dia aza mba hanazava ny mahatsiaro tena mifanavakavaka izay misy fiantraikany olona nividy fitondran-tenan'ny. Iray azo atao fanazavana, atsangana ny mpanoratra, dia ny hoe ny olona tsy nahy manendry danja bebe kokoa ny vokatra nanana ny lehilahy noho ny vehivavy, nitarika mety mpividy mba asaovy bebe kokoa.
Raha ny fianarana dia tsy maintsy hiatrika ny fikarohana bebe kokoa, dia ho iray amin'ireo voalohany mba hanehoana amin'ny vokatra tena tahirin-kevitra ny fomba tsy fitoviana sy ny fanavakavahana ny vehivavy hametraka amin'ny miovaova tombon-dahiny eo amin'ny tsena an-tserasera.
Kricheli-Katz sy ny toekarena Tali Regev nandinika US varotra ny 420 malaza indrindra vokatra avy amin'ny avokoa ireo karazana sokajy eBay eo 2009 ary 2012. Hitan'izy ireo fa ny vehivavy natao ka efa ho ny ampahefatry ny mpivarotra ao amin'ny dataset, ary na dia eo aza ny fananana tsy fivarotana traikefa, Faly izy ireo lazany tsara kokoa toy ny mpivarotra.
Ny tsy fitoviana eo amin'ny vidin-javatra ho an'ny entana aloa dia hita amin'ny vokatra ampiasaina ary koa ny vaovao, fa ny elanelana lavitra kelikely kokoa. Eo ho eo, mpividy nandoa ny vehivavy 97% ny vidiny dia nandoa olona, ​​fa iray ihany secondhand zavatra. Ny hantsana Mety ho kely noho ny fitongilanana manohitra vehivavy dia saika offset ny mpividy manana matoky ny vehivavy bebe kokoa ny famaritana ny secondhand entana, ny mpikaroka manoratra ao amin'ny gazety Science Mandroso.
Na eBay mpivarotra tsy hanambara ny lahy sy ny vavy eo amin'ny toerana, ny mpikaroka nihazakazaka mitokana fanandramana izay nampiseho fa ny mpivarotra 'usernames, ary ny zavatra namidiny, dia marina mpitari-dalana. "Raha mivarotra aho ny iPhone, fa ny kiraro sy ny kitapom-bola, dia Ho somary mora ny milaza ahy ho toy ny vehivavy,"Hoy Kricheli-Katz. "Ary ny zavatra bebe kokoa aho, mivarotra, ny olona marina kokoa dia afaka hanasokajiana ahy. "
Mba hitsapana ny fiahiahiana fa mpividy tsy nandoa ny vehivavy noho ny lehilahy, satria fotsiny hoe ny lahy sy ny vavy, ny Duo fanandramana nihazakazaka an-tserasera. Dia nangataka ny olona mba ambarao ny vola be izy ireo ho $100 Amazon voucher. Rehefa voucher efa naterina ny "Brad", ny veloma dia avo noho izany rehefa nanolotra ny "Alison".
Ny vokatra dia maneho fa, eo ho eo, vehivavy nanaram ratsy amin'ny aterineto tsena. Fa ny handalina any an-tahirin-kevitra maneho ny sasany ho an'ny vehivavy upsides mpivarotra. In sasany Sokajy, ny vehivavy matetika nivarotra mitovy zavatra bebe kokoa noho ny olona dia nanao. Ny modely manokana ny Barbie vidin'ny 16% bebe kokoa ny vehivavy mpivarotra, raha biby sakafo, Nihevitra, vidin'ny 20% Bebe kokoa. Etsy ankilany, lehilahy nanao whopping 270% kokoa rehefa nivarotra ny Nintendo Wii, 30% bebe kokoa amin'ny mafana pirinty, ary 20% bebe kokoa amin'ny Golf baolina. A mbola hanohon antsy vidin'ny 61% tsy raha nivarotra ny vehivavy noho ny lehilahy. "Tsy te-ho ny vehivavy fivarotana izay,"Hoy Regev.
Rehetra izay mandao ny fanontaniana ny zavatra ny vehivavy mba hanao. Tetika ny mpikaroka iray efa nandre dia ho an'ny vehivavy ny manafina ny lehilahy solonanarana ao amin'ny eBay sy mivarotra zavatra iray amin'ny fotoana mba hanampiana ny hanafina ny lahy sy ny vavy. Fa na Kricheli-Katz na Regev dia mpankafy izany fomba. "Tsy te-ho velona ao amin'ny tontolo izay olona manafina ny lahy sy ny vavy. Mety toa toy ny tetikady tsara, fa tokony ho hampihena izany fahabangana amin'ny fomba hafa,"Hoy Kricheli-Katz.
"Ny tetika dia tsara kokoa ho an'ny mpividy mba hitady vehivavy mpivarotra sy ny hividy azy,"Hoy Regev. "Afaka mahazo tsara kokoa ny vidiny, fa miaraka amin'izay koa,, mpanolo-tsaina bebe kokoa ny vehivavy ny vokatra dia hanampy ho tery ny banga. "Tsara noho izany aza, mandoa ny vehivavy mitovy ny vidin'ny toy ny lehilahy mpivarotra.
"Inona no tena manantena fa ny fanaovana dia ny olona kokoa ny mahafantatra ireo tsy nahatsiaro tena mifanavakavaka, Angamba rehefa mandeha ny fotoana dia tery ny hantsana,"Hoy Kricheli-Katz. Vao mainka, ny vehivavy matetika nandoa mihoatra noho ny olona noho ny vokatra dia nividy tamin'ny eBay.
Ao amin'ny gazety ny mpanoratra manangana fanontaniana momba ny hafa ny firaisana ara-nofo izay tsena ny mpivarotra dia tsy niahanahana: "Amin'ny maha-politika, eBay Tsy milaza mivantana ny lahy sy ny vavy ny ny mpampiasa. Na dia izany aza, lehilahy sy ny vehivavy dia mora lahy sy ny vavy-sokajy hafa mpampiasa. Isika miahiahy fa na dia lehibe kokoa eo amin'ny divergences ireo vokatra hafa tsena lahy sy ny vavy foana izay fantatra,"Dia manoratra.
21905	4 Article, eBay, fitoviana, Iana Sample, Main section, News, Psychology, Science, The Guardian, UK vaovao
← 14 Raha ny marina Times Google Voavonjy fiainan'ny olona iray [Ranker] The Perfect Time ny taona mba ho 10 Big Fividianana [MENTALFLOSS] →